Ibsaa Jireenyaa - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
Sammubani.com Google Play Keessatti
Sammubani.com haala aplikeeshiniitiin Google Play keessatti argachuuf: As Tuqi Garuu Google Account yoo hin qabaatin, Liinki tana tuqi. Buusun dura, mobaayili keessan irraa gara “Setting” deemun “Security” dhaqaa. Ergasi “Unknown Sources” (Yes) godhaa. Ergasii Linki armaan olii irraa buusaa.
March 23, 2021 Sammubani Leave a comment
February 26, 2021 Sammubani Leave a comment
February 8, 2021 Sammubani 8 comments
sammubani.com irraa barruulee haala PDF’tiin buusuf gara jalaatti, mallatto Print, PDF fi E-mail qabu tuqaa. Ergasii mataa gubbaa gara bitaatti mallattoo PDF tuqaa. San booda Download PDF bakka jedhu tuquun buufadhaa.
February 6, 2021 Sammubani Leave a comment
February 5, 2021 Sammubani Leave a comment
January 24, 2021 Sammubani 4 comments
Suuratu Al-Buruuj yommuu qaraanu seenaa tokko dhagayuun keenya hin oolu. Seenaa kana keessatti waa baay’ee hubanna. Isaan keessaa: 1)-Moottonni abbaa irraa akka gooftaatti of ilaalun namoonni akka isaan gabbaran (waaqefatan) barbaadu. Nama isaan hin gabbarre adabbii hamaa gara-jabeenyaan guuttame adabu. 2)-Shoora mucaan xiqqaan taphate. Mucaan xiqqaan kuni mootii kana gabbaruu diduun aango isaa ni sochoose. 3)- Rakkoon garmalee isaanitti haa baay’atuyyu malee mu’mintoonni iimaana isaanii irratti gadi dhaabbata. Magaazidhaan yommuu baqaqfaman, ibiddatti yommuu darbaman Islaama irraa duubatti hin deebine. Kuni hundi Islaama irratti gadi dhaabbachuuf fakkeenya guddaa namaaf ta’a. Mee seenaa warra boollaa haa ilaallu: